Ciidamada Xoogga dalka oo diyaargarowgii ugu dambeeyay ugu jira Howlgalada Al shabaab dalka looga saarayo | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamada Xoogga dalka oo diyaargarowgii ugu dambeeyay ugu jira Howlgalada Al shabaab...
Ciidamada Xoogga dalka oo diyaargarowgii ugu dambeeyay ugu jira Howlgalada Al shabaab dalka looga saarayo
Muqdisho (SONNA) Maamulka Gobalka Bakool ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka ay wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyay howlgalada lagu ciribtirayo maleeshiyada Al-shabaab.
Guddoomiye ku xigeenka Gobalka ahna kusimaha Guddoomiyaha Gobalka Bakool C/llaahi Maxamad oo la hadlay Wakaalada Wararka SONNA ayaa sheegay in Ciidamada Xoogga dalka ay wadaan Dhaq dhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo ay kula wareegayaan deegaanada fara ku tiriska ah ay cadawgu gacanta ku hayaan.
“Howlgaladani waxa ay qeyb ka yihiin kuwii dowlada ay ku Dhawaaqday isla markaana Maleeshiyada Al-shabaab looga saarayo deegaanada gobalka ka tirsan, waxaana heer gaba gaba ah maraya abaabulkii ugu dambeeyay oo ay ciidamada dowlada kula waregayan daganasi ;sidaa waxaa yiri gudomiya ku xigeenka.
Ciidamada Xoogga dalka ayaa muddooyinkii dambe isku diyaarinayay Howlgalo guud ahaan dalka looga xureynayo cadowga umadda Soomaaliyeed ee Al shabaab, iyagoo sidoo kale howlgalo ay sameeyen guulo waa weyn kasoo hoyay, waxaana isa soo dhiibay Maleeshiyo ka tirsanaa Al shabaab iyadoo kuwa kale ay ka carareen meelihii ay ku sugnaayeen waxaana ku daba jira Ciidamada oo ay ka go’an inay guud ahaanba dalka ka sifeeyaan Maleeshiyada Jid iyo Jiha diidka ee Al shabaab.
Previous articleWafdi ka socda Dowladda Qadar oo Muqdisho soo gaarey+Sawirro
Next articleMasuuliyiinta Indonesia oo sheegay inay xoog uga saari doonaan dadka dagan goobtii volcanuhu ka qarxey.